Fan of kulan guul degdeg ah? Waxaan leenahay ka ugu fiican ciyaarta guul degdeg ah kuu. Cash Buster Towers ka ah horumarinta software ciyaaraha IWG waxaa ka buuxa qaar ka mid ah muuqaalada runtii xiiso leh. Waa dhan ah oo ku saabsan daadgureyntaasi duntu iyo baabbi'iyeen block ah munaaradaha. Qaar ka mid ah midabo kala runtii quruxsan loo isticmaalay dhigaayo interface ee ciyaarta this. Tani waa bedelka u ciyaarta asalka Cash Buster. Tani ugu fiican ee guul degdeg ah ciyaarta ayaa abaal-marin lacageed ilaa £ 1,000,000 a. Waxaa jira qaar ka mid ah kulan gunno la yaab leh ayaa sidoo kale la siiyaa ciyaartoyda. music soo jeeda waa sida xiiso leh sida muuqaal u eg ka ciyaarta this la yaab leh.
Cash Buster Towers Maqaallo ugu fiican ciyaarta guul degdeg ah
Tani Best Instant Win Game waxa uu leeyahay qaar ka mid ah muuqaalada runtii xiiso leh oo waxaa la at dhan ma adag tahay in la fahmo. oo dhan ayaa waxaa ka mid ah daba noqonayaa munaaradaha ee blocks midabo kala duwan leh in sii is bajin in wareejin kasta. Waxaa jira laba hababka kala duwan ee play. screen waxay leedahay button wareejin iyo tirada dhigeeysa on dhinaca bidix ee bogga ku. Xarunta, waxaa jira blocks la waluba wuxuu lahaa lacagta abaalmarinta ku xusan on top iyaga ka mid ah. On dhinaca midig waa miiska oo muujinaya xiddigaha tiradooda la ururiyey iyo fallaadho. Waxaad qiyaas u sameyn kartaa khamaar ah adigoo gujinaya ah + iyo – badhamada shaashadda.
gameplay ee this Best Instant Win Game wax badan ka sahlan yahay waxa ay u muuqataa. All aad u baahan tahay inaad samayso waa miiqdaan ku duntu iyo tirada u muuqata on duntu ka baabbi'in doonaa tiro in of blocks ka munaaradaha. Waxaa jira Play a caadiga ah iyo hababka ciyaarta Play celi. In hab caadiga play, waxaa lagu siinayaa 5 dhigeeysa waayo, bet kasta oo tirada ka 1-6 waxaa lagu muujiyey on duub hoose munaaradaha. Waxaa jira saddex calaamado gaar ah; xiddiga, goobada iyo calaamadda arrow. Haddii aad ka heli calaamadaha 4-star, waxay shidaa ciyaarta xiddiga gunno ah. Astaanta arrow The refills block munaaraddii oo dhan mar kale iyo haddii aad u ururiyaan 4 oo ka mid ah, ciyaarta bonus arrow waxaa keena. Astaanta goobada sii buuxinta qaybaha ay miiska bonus goobada.
Haddii aadan ku guuleystay wax hab Normal Play ka dibna waxaa la siin doonaa wareejin ah oo lacag la'aan ah aad dhamaadka waxaa loo bixiyey feature celiyaan play ah. On wareejin in duntu ku tusi doonaa waxyaalaha la mid ah sida caadiga ah feature play; i-6 Lambarada, calaamad xiddig, Astaanta arrow ama calaamad goobaabin ama lacagta abaalmarinta deg dega ah.
Tani Best Instant Win Game waxa uu leeyahay qaar ka mid ah muuqaallo kale run ahaantii la yaab leh oo dhawaaq asalka captivating. gameplay waa mid aad u xiiso badan oo waa hubisaa in ay ciyaaryahanka daqar muddo dheer. Calaamooyinka bonus waa hab fiican oo in la sameeyo qaar ka mid ah lacag caddaan ah oo dheeri ah marka laga reebo guuleystayna ee ciyaarta salka.